Askari laaluush ka qaatay qof shacab ah oo la xiray (Dhageyso) - Latest News Updates
Askari laaluush ka qaatay qof shacab ah oo la xiray (Dhageyso)
Shalay ayaa waxa baraha Bulshada lagu faafiyay Askari ka tirsan Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo lacag laaluush ah weeydiinaya qof Shacab ah oo gaari watay,hayeeshee qofka Shacabka ah uu diidan yahay,waxaana a shaaciyay in askarigaas xabsiga la dhigay.
Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Qaasim Axmed Rooble ayaa sheegay in Askariga oo lagu Magacaabo Cabdi Cabdulle Xasan oo si awood ah qof Shacab ah oo watay Gaariga uga qaatay lacag laaluush ah.
“Askariga ayaa joojiyay gaari Nin Shacba ah uu watay waxa uu weeydiiyay sharicigii iyo Leesinkii,markii uu yiri mahayo waxa uu weeydiistay lacag sida aad ku aragteen baraha Bulshada, intaasi kadib ciidanka booliska ayaa ka warhelay kadibna soo xiray ayuu yiri Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Sidoo kale Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in Askariga uu ku xiran yahay Xarunta dambi baarista ee CID-da,isla markaana ay la xiran yihiin 32 qof oo uu ku jiro taliyihii hore ee Saldhiga Warta-nabada loona heysto lacag laaluush ah oo ay qaateen.
Saacadihii la soo dhaafay ayaa aad looga hadal hayay Baraha Bulshada arrinta la xiriirta askariga Qofka Shacabka ah weeydiisanayay lacagta laaluushka ah,balse ugu dambeyn askarigaas la xiray.